BEEWOOD - I-Airbnb
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguFrederico
Ziva iphunga lomthi kunye nomnxeba walo oyingqayizivele kwindlu yokhuni ekhululekile kwaye ehambelanayo, ebekwe kwindawo eluhlaza egcwele iikona ezintle.
Indlu inamagumbi okulala ama-2, igumbi lokuhlala elikhulu, indawo yeofisi, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela, i-barbecue kunye neendawo zokupaka ezigqunyiweyo. Ibalcony encinci ejonge echibini egcwele ubomi.
Imithi yenza le ndawo ibe yiparadesi encinci egcwele ukukhanya / ukuchasana kwethunzi kunye neendawo ezisothusayo, imithi yemveli kunye neyokungaqhelekanga iyaxuba ukwenza i-atmospheres ekhethekileyo kwigadi emema amabhabhathane kunye neentaka ukuba zihlale kuyo.
Kude nendlu, phantsi kwe-oki, kukho ihoko yeenkukhu apho kuhlala khona iinkukhu, imivundla kunye neehagu zeguinea.
Indawo ivaliwe kwaye inika ukufikelela kuphela kwindlu yemikhosi kunye nendlu BEEWOOD.
Iphuli, iTrampoline, iSlackline, iSpeedminton, iBadminton, iTRX, iHamock ...
I-HDTV ene-I-Netflix, izitishi zeTV eziqhelekileyo
Bonisa zonke 69 izinto onokuzisebenzisa
4.89 out of 5 stars from 146 reviews
4.89 · Izimvo eziyi-146
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi146
Ilali encinci yasemaphandleni enobomi babalimi. Ukuhamba kwilali kunye nokusebenzisana nabemi bayo, uhamba ukuya elunxwemeni lomlambo iimitha ezingamakhulu ambalwa, ikofu okanye i-ayisikrimu ngelixa usonwabela ukubhabha kwe-kingfisher, yinto enokuyonwabela. Ilali entle yaseVouzela ikumgama oziikhilomitha ezili-17 kodwa ayifanelanga ukuphoswa ngenxa yembonakalo yomhlaba, imbali, ilifa lemveli kunye nobuncinci bepastry yayo edumileyo "pasteis de Vouzela".
Le lali ilele kwintlambo ephakathi kweenduli ezimbini ezityebileyo, iCaramulo neFreita.
Olona lwandle lukufutshane luziikhilomitha ezingama-55 kuphela kwaye eyona ntaba iphakamileyo ePortugal imalunga neekhilomitha ezingama-85.
Umbuki zindwendwe ngu- Frederico
Sou de Viseu, Fiais. Gosto de natureza, bricolage, fotografia, tudo... :)
Inombolo yomthetho: 27117/AL
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 17:00 - 23:00